Home Wararka DEG DEG:Qarax Xoogan oo ka dhacay goob uu kusignaa Ra’iisul Wasaraaha Itoobiya
DEG DEG:Qarax Xoogan oo ka dhacay goob uu kusignaa Ra’iisul Wasaraaha Itoobiya
Waxaa goordhow uu qarax xooggan ka dhacay caasimadda Itoobiya ee Adis Ababa, waxaana la sheegayaa in lala eegtay dibad-bax ay wadeen taageerayaasha ra’isul wasaare Abiy Axmed.
Qaraxa waxaa uu dhacay iyada uu ra’isul wasaaraha Abiy Khudbeeyay, ciidamada ammaanka ayaana Abiy goobta kala cararay.
Abiy Axmed ayaa ra’isul wasaare noqday kadib markii uu is-casilay ra’isu wasaarihii hore Hailemariam Desalegn. Faahfaahinta Goordhow la soco
Previous articleMaamulka Jubbaland oo shaaciyay halsabab oo Shabaab looga guuleeysan layahay
Next articleQaraxii ka dhacay fagaaraha uu kusugnaa Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo Warar dheeraad ah laga helayo+Sawiro
XOG; Qalbi Dhagax Shacabka Somaliyed balan muhiim ah ka qaaday,lana hadlay...
Yaa ka dambeeyay in lagubo Masjid ku yaala Bariga Quds